Kaarka xashiishka oo bilaash ah | xbox dhaliilaha kaararka hadiyadaha | Xbox-ka xor ah ee lacag-bixinta?
Home // blog // Kaararka hadiyadeed ee bilaashka ah
Ma dhali doonno inaanu hayno meel adag oo ka mid ah warshadaha kaadhka hadiyadeed ee Xbox. Hase yeeshee, waxaanu ku dhajinnay dherer badan iyo kharashka si loo sahamiyo suuqa Xashiifka hadiyadeed. Jidka oo dhan, waxaan ku soo aragnay tiro aad u tiro badan oo ah goobo ay dhammaantood ahaayeen kuwo muuqda oo aan lahayn wax walax. Si daacad ah ayay u hadashay, waxaa nala soo qabtay by ay dhicisoobay ee noo soo bixiya kaadhadhka hadiyadeed ee Xbox. Wax kale oo aan ahayn halkaan iyo halkaan, wax qiimo ah kama helin. Asal ahaan, waxaanu leenahay qaybteena qayb ka mid ah xaflad qosol ah. Inkasta oo niyadayada iyo hankeringa, waxaan sii wadnaa raadkayaga ilaa aan ka aragno nalalka dhamaadka tuneelka. Haa, dadaalkayaga ugu dambeyntii waa la bixiyay, waxaana helnay fursad aan ku guuleysanno guusha hubka furan kaadhadhka hadiyadeed ee Xbox raadinta.
Heshiiska dhabta ah!
Si dhakhso ah u socodka waqtigan xaadirka ah, waxaan dareemeynaa sida aan ku aragno dariiqa sagaalka sagaal iyadoo aan helno muuqaalkeena cajiibka ah. Waxaan u maleyneynaa in aan la wadaagno marxaladda nalalka iftiinka ee nooca si aan u hubino in si fiican u dardar-gelinta dadka diyaar u ah inaysan mar dambe niyad jabin mar kale. Marka, ujeedada qodobkan Xbox waxa weeye in la caawiyo mid ka mid ah iyo dhammaantoodba way ka soo baxaan qulqulka waxayna u soo baxaan dhinaca kale sida inoogu raaxaysto lacag la'aan ah Xbox code gift gift gift. Haa, waxaan ka hadleynaa 100% Kaararka hadiyado lacag la'aan ah. Sidaa darteed, noo ogolow inaan kuu muujino sida aad u heli karto free Xakamaynta kaarka xashiishka ah si ay u burburiyaan dhibaatada kaararka hadiyado been abuur ah. Dhamaadka qoraalka, waxaad dareemi kartaa inaad nagu leedahay qaxwo si aad ugula taliso gabal gabal. Sidaa daraadeed, bal aynu isku darsanno kaadhadhka hadiyadeed ee Xbox helitaan.
Caddeynta iyo barashada
Isticmaalaya nambarka casriga ah, amniga iyo bilaashka xashiifka ah
In ka badan qof kale, waxaan ku faraxsanahay inaanu noqono kan warka wanaagsan. La kulan bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah. Taasna Xbox Live Generator wax sahlan ma laha website, waxaad awoodi doontaa inaad dhaliso lacag la'aan ah Xbox code gift gift gift iyada oo aan tuurin gacanta iyo lugta. Hase ahaatee, goobta waa 100% ammaan, ammaan, iyo sharci. Sidaa daraadeed, ma jiraan wax khafiif ah oo jidka ah. Dhamaan run ahaantii waa inaad sameysid ujirta websaydhka oo dooro kaadhka hadiyadda ah ee aad dooratay, sugna muddo ilaa nidaamku kuu keeno kaadhka hadiyadeed. U aamina maya ama maya, waxaanan isku dayeynin inaan si fudud u dhigno. Xaqiiq ahaan, way fududahay sida uu u dhawaaqayo. Haddii aad ku cusub tahay websaydhka, nidaamka is-beddelka ah ayaa ku weydiin doona inaad xaqiijisid inaad tahay bini'aadam ama haddii kale. Dabcan, ma jirto baahi loo qabo in laga baxo taas sababtoo ah waa habdhaqan caadi ah oo ay raacaan mulkiilayaasha bogagga intooda badan maalmahaas si ay u ilaaliyaan spammers-kii jebinta. Marka la xaqiijiyo, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato lacag la'aan ah Xbox code gift gift gift inaad doorato. Sidaas, Kaadhadhka hadiyadaha lacag la'aanta ah ee Xbox oo aan lahayn baaritaanno waa inaanan riyo aheyn meel cidkasta ah.
Qadar xadadan oo kaararka hadiyadeed
Sidan oo kale, boggaga ayaa sheegaya in aad abuuri karto codad aan xadidnayn. Inkastoo aan bogga dib u soo celinayno, dib uma celin karno bayaankooda. Waxaa jirey waqtiyo markii uu ka soo laabtay goobta banaan-baxa. Taas oo la yiraahdo, dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen kuwo dhif ah. Inta badan, waxaan si aad ah ugu faraxsanahay inaan helno Kaadhadhka hadiyadaha lacag la'aanta ah ee Xbox oo aan lahayn baaritaanno ama xarigaha ku lifaaqan abaalmarinta wakhtiga aan ku leenahay goobta. Sidaa darteed, dhab ahaantii ma dareemayno inaan ku dhufanno bogga si aan usoo celino nadiifinta marar dhif ah. Kadib, ma jiraan meelo badan oo sharci ah oo meesha ka baxsan oo bixin kara lacag la'aan ah Xbox code gift gift gift iyada oo aan wax cillad ah lahayn. Sidaas awgeed, waxaanu noqon doonaa mid deeqsi ah oo aan ku siin karno bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah amaahdaas oo ay sabab u tahay, sababtoo ah ma nala joogsanayno saacado badan waqtigeena. Ka dib oo dhan, ma jirto dareen xun marka loo eego rajada ah kaadhadhka hadiyadeed ee Xbox, ka dibna waxaa si naxariis leh u muujiyay albaabka laga baxayo.
Ilaah wuxuu u diraa hadiyad!
Si daacad ah ayey u hadlaan bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah waxay u timid inaan badbaadinno, markii aan u baahannay. Xaqiiqdii dhab ahaantii waannu ku sugnay dhammaadka wiigga, oo aynaan dulqaadan lahayn. Sidaas darteed, soo degitaanka boggan wuxuu cadeeyay inuu yahay hadiyad Ilaah u soo diray. Marka la eego dhibcooyinka been abuurka ah Kaararka hadiyadeed ee Xbox ma jiro sahan goobaha halkaa ka baxsan, taas bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah ayaa u muuqda in uu yahay doorasho aan maskax furan lahayn dhammaan ciyaartoyda ciyaaraha ka baxsan kuwaas oo doonaya waxyaabo xashi ah oo lacag la'aan ah. Markay ogaadeen baahida loo qabo xeer codsiyada xbox, kuwa sameeya bogga ayaa abuuray bam Xbox Live Generator wax sahlan ma laha qalabka, taas oo aan ku filla Haddii dib loo eego Internet-ka, waa tan bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah waxaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad la isku halayn karo oo tiknoolaji ugu sareysa si loogu isticmaalo codsiyo firfircoon oo sharci ah, mar kasta oo ay jirto codsi isku mid ah. Kooxaha cayaaraha cayaarta ayaa waqti ka qaadatay noloshooda mashquulka ah si ay u soo bandhigaan saacadaha, dadaalka, iyo lacagta si ay taasi keenaan bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah illaa hadda. Sidaas awgeed, koofiyado ayaa u gudbiyay milkiilayaasha bogagga oo qarxay xuduudaha noloshooda caadiga ah si ay ula yimaadaan waxyaabo kala duwan oo gaar ah.
Habka la baadhay si aad u hesho kaadhadhka hadiyadeed ee xashi!
Shakhsi ahaan, waxaan nasiib ku fileynay inaan ku dhufanno bogga dhexe ee maalinta caadiga ah. Waan ku faraxsanahay markii aan awoodnay inaan dhalinno kaadhadhka hadiyadeed ee Xbox Koodhka ogaysiiska daqiiqad. Waxay u egtahay sida 'Eureka'. Hoyga cayaarta ee jecel xoriyada lacag la'aanta ah ayaa ogaanaya waxa aan ula jeedno. Ka dib oo dhan, dhammaanteen ma haysanno lacag aan ku dhufano ciyaaraha fiidiyowga. Sidoo kale, dhammaan waalidiintu ma fahmi doonaan murugada iyo jaceylka wax aan aheyn wax aan la xiriirin. Marka, caruurta waxay ku jiri karaan meel adag. Waxaan aragnay halganka, sidaas darteed waxaan ognahay dhadhan dhanaan ee ka baxa afka. Tan iyo markii aan ogaanay bogga, waxaan naftayda u badbaadinay bangiga lacagta bangiga, mana waligeen inaanu wax ka qabanno waayo-aragnimada aan soo dhaafnay. Si ka wanaagsan, marnaba ma dareemin baahida loo qabo in la eego internetka sida waalan Xbox.
Waa inaadan lacag ku bixinin kaararka hadiyado ah oo dheeraad ah!
Xusuusnow, shirkado waaweyn oo ciyaaraha ah ayaa sameeya tobanaan iyo malaayiin doolar sannad kasta adoo ku dalacaya wax kasta iyo wax kasta oo ku jira magaca 'ekaaqyada'. Sidaa awgeed, luminta qaar ka mid ah qoodhadhka ma dhaawici doonaan xisaabteeda bangiga. Sidaa daraadeed, ma nihin fikrad la wadaagno goobta dad badan oo akhriya tan. Waxaan u maleyneynaa inay tahay arrinka saxda ah ee la sameeyo tan iyo markii la sameeyay Soo saaraha kaararka deeqda ee Xbox awood u leeyihiin inay abuuraan tiro badan oo kaararka hadiyadeed ee firfircoon. Sidaa darteed, hal iyo midba way ka faa'iideysan karaan. Markaa, sii wad oo iska daawee naftaada lacag la'aan ah Xbox code gift gift gift. Wixii kuwa weli hufan, bixiyaha kaarka lacag-bixinta Xbox lacag la'aan ah wuxuu u shaqeeyaa sida sixirka. Waxay ka baaraandegtaa liis adag oo ka mid ah codsiyada hadiyadeed ee Xbox oo koodhka siinaya isticmaalaha. Qodob kasta oo uu soo saaro nidaamka waa mid gaar ah wakhtiga la abuurayo. Marka, midna ma khaldami doono qaladaadka inta lagu jiro isticmaalka koodhka.
50 Comments ON " Kaarka xashiishka oo bilaash ah "
robert58 Nofeembar 28, 2017 at 7: 50 pm - Reply
Waad ku mahadsan tahay guurka
MeowTWO Nofeembar 30, 2017 at 3: 39 pm - Reply
Gaadhay lolkeeyga kaarka, u soco midka labaad
Mychael December 1, 2017 at 6: 35 AM - Reply
Bobby December 3, 2017 at 9: 22 AM - Reply
heley 25 $ gc
AWESOME_DUDE December 8, 2017 at 2: 15 pm - Reply
Redhorse58 December 14, 2017 at 7: 31 AM - Reply
WOW December 20, 2017 at 7: 15 pm - Reply
Lol waa tan dhabta ah
Dib u furan December 23, 2017 at 10: 37 AM - Reply
Sidee loo iibsadaa ???
Pinguin ee dhiigga December 29, 2017 at 7: 49 AM - Reply
Illuminati ayaa xaqiijiyay
nasiib darro Janaayo 3, 2018 at 7: 35 AM - Reply
Waxay ahayd mudan dadaalka
Siron Janaayo 17, 2018 at 7: 36 AM - Reply
Fadlan fadlan u soo qaado !! Waxaan rabaa in mar kale la isticmaalo
S4tino Janaayo 22, 2018 at 6: 40 AM - Reply
redheaddddsss Febraayo 9, 2018 at 8: 24 AM - Reply
qwerty Janaayo 28, 2018 at 10: 49 AM - Reply
Tani waa heshiis dhab ah
AK47 Febraayo 22, 2018 at 1: 28 pm - Reply
Waxaad tahay geesiga
Pacman March 1, 2018 at 10: 36 AM - Reply
Travis Maarso 22, 2018 at 7: 07 pm - Reply
jacayl badan oo aad u weyn
ANTMAN March 29, 2018 at 9: 23 AM - Reply
Aad ayaan u faraxsanahay, in aan ka helay boggan !!!
Amanda Abriil 11, 2018 at 11: 43 pm - Reply
U baahan tahay caawimo kaadhka Xbox ah
xbox_god Abriil 12, 2018 at 6: 32 AM - Reply
Wareegtada ugu wanaagsan
David roberts Abriil 24, 2018 at 10: 32 AM - Reply
saaxiib Abriil 26, 2018 at 4: 58 pm - Reply
Saaxiib ah oo aniga ii sheegey boggaan !!
qwerty May 3, 2018 at 5: 37 AM - Reply
Combatwombat May 8, 2018 at 8: 52 pm - Reply
Sidee ayaad dib u furaneysaa?
Strice May 10, 2018 at 12: 33 pm - Reply
Munaasabadda ugu fiican!
Crazy_Frog May 24, 2018 at 1: 34 pm - Reply
RenderM May 17, 2018 at 7: 12 pm - Reply
Birchy7 May 31, 2018 at 1: 55 pm - Reply
heley kaarka xarriijinta xargaha oo aan soo furtay, wuxuu ahaa mid aad u fudud in la helo
dnoyii Juun 20, 2018 at 8: 18 AM - Reply
DIGI July 5, 2018 at 10: 35 AM - Reply
Tani waxay ii farxad gelisay 🙂
Kern July 22, 2018 at 11: 32 AM - Reply
Garcia August 2, 2018 at 7: 50 AM - Reply
Waad ku mahadsantihiin
Selec September 7, 2018 at 5: 23 AM - Reply
wali way shaqaysaa!
kacay September 14, 2018 at 2: 01 pm - Reply
Tomyy September 20, 2018 at 7: 30 AM - Reply
Abuuray kaar aqoonsi oo ah 50 $ oo ka furtay 🙂
wax September 27, 2018 at 7: 48 AM - Reply
Waxyaabo waa dhab!
Santa Oktoobar 4, 2018 at 8: 00 AM - Reply
riwaayad farxad leh
Faxamu Oktoobar 11, 2018 at 8: 17 AM - Reply
Gotti Oktoobar 25, 2018 at 9: 45 AM - Reply
Codsiyada si guul leh loo soo saaray !!!
shabaq Nofeembar 15, 2018 at 11: 36 AM - Reply
Waxaad tahay ugu fiican!
qaboojiye Nofeembar 22, 2018 at 8: 44 AM - Reply
Tani waa mid aad u fiican!
Opopop Nofeembar 29, 2018 at 10: 59 AM - Reply
ayaa iga soo furtay iyada oo aan wax dhibaato ah
kiole December 13, 2018 at 8: 51 AM - Reply
Wow, mahadsanid qaybsiga
Kakkels December 20, 2018 at 8: 51 AM - Reply
Waan ku faraxsanahay inaan helay boggan
juanso Janaayo 3, 2019 at 12: 10 pm - Reply
aniga iyo haha
Truman33 Janaayo 17, 2019 at 3: 19 pm - Reply
Tani waa run
Donald Febraayo 7, 2019 at 4: 28 pm - Reply
Aad ayaad u mahadsantahay!
wok Febraayo 21, 2019 at 6: 29 pm - Reply
Waan ka dhigay, wuxuu ahaa mid sahlan: p
heshiis Febraayo 28, 2019 at 4: 53 pm - Reply
molyaha quduuska ah
Dekan Maarso 7, 2019 at 2: 57 pm - Reply